Kulan Ay Yeesheen Hogaaminta Deegaanka - Cakaara News
Kulan Ay Yeesheen Hogaaminta Deegaanka
Jigjiga(Cakaaranews) Axad, 7dii August 2016. Waxaa niskii danbe ee maanta hoolka shirarka ee xafiiska madaxwaynaha kulan kuyeeshay heerarka kaladuwan ee hogaaminta xafiisyada heer deegaan.
Kulankan ayaa waxaa kasoo qaybgalay hogaaminta ugu saraysa xukuumada oo uu ugu horeeyo madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar, afhayeenka golaha xildhibaanada ahna gudoomiyaha XDSHSI mudane Maxamedrashiid Isaaq, madaxwayne kuxigeenada, golaha wasiirada, wasiiro kuxigeenada, maareeyayaasha wakaaladaha, kuwa shirkadaha iyo maareeye kuxigeenada intaba.
Hadaba kulankan oo ay ujeedadiisu ahayd tababar gaaban oo uu soo diyaariyay xafiiska xarunta dhexe ee XDSHSI oo laxidhiidha kobcinta hadafka iyo garaadka siyaasadeed ee dhinacyada dardargalinta shaqooyinka iyo waliba dhiirigalinta sidii loo gaadhi lahaa qorshayaasha higsiga fog ayaa waxaa ugu horayn furay madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar oo ugu horayn hogaaminta casharka kasiiyay taariikhda dheer ee uu wadanku soo maray guud ahaan iyo sida ay kutimid itoobiyada cusub ee kudhisan dimoqraadiyada isagoo gaar ahaana kudheeraaday sooyaalkii taariikheed ee deegaanka islamarkaana qeexay dhibaatooyinkii xisbiyada kaladuwan ee wadanka iyo kuwa deegaankuba sida boqortooyadii wadanka kasoo talin jirtay, dhargigii, ubbo, lego, al-itaxaad iwm ay kuhayeen shacabwaynaha deegaanka iyo marxaladihii cilmiyaysnaa ee lagaga soo gudbay. Wuxuuna madaxwaynuhu tusaaleeyay inay wali jiraan dad kaxun nolosha, dimoqraadiyada, sinaanta, cadaalada, horumarka iyo nabadgelyada ay maanta haystaan shucuubaha iyo qawmiyadaha kaladuwan ee kunool dalka oo raba inay ummada dib ugu celiyaan burburkii iyo balaayooyinkii laga bogsaday. Madaxwaynaha ayaana casharka tababarkan ugu soo koobay hogaaminta in tabaha aan kaguulaysan karo cadawgeena kali ah ee maanta oo ah saboolnimada ay kamid yihiin in lasii dardargaliyo hawlaha horumarka, nabadgelyada iyo maamulka suuban si wakhti gaaban gudihii uu dalku uga mid noqdo wadamada uu dhaqaalahoodu dhexdhexaadka yahay.
Dhanka kale, heerarka kaladuwan ee hogaaminta xafiisyada deegaanka oo kahadlay kulanka ayaa si wayn ubogaadiyay kulankan tababarka iyo aqoon korodhsiga isugu jira. Waxayna sheegeen inay wax wayn oo horay uga maqnaa ay kafaaiiden iyagoo ugu danbayna balanqaaday inay hal meel ah uga soo wada jeedaan cadawga kaxun nolosha, nabada iyo horumarka shacabwaynaha dalka iyo deegaankaba.